Paleogene fauna: njirimara, mmalite na usoro | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime Oge Cenozoic anyị nwere Oge Paleogene. Ọ bụ nkewa nke timescale nke gafere afọ 66 nde wee gwụ ihe dịka 23 nde afọ gara aga. N'oge a anyị nwere nnukwu ntopute nke mammals n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ha ga-esi n'ụdị pere mpe pere mpe. Na Paleogene anụmanụ kaa akara tupu na mgbe ọ gasịrị, tụmadị na mammals.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị gbasara njirimara niile na mbido nke ụmụ anụmanụ Paleogene.
1 Oge Paleogene
2 Paleogene anụmanụ
Oge a bụ mmalite nke ụdị oge ochie nke ndụ ọhụụ. Anyi aghaghi iburu n’uche na na mbido usoro ihe omimi nke ala a, enwere oke nkwekorita nke dinosaurs na njedebe nke oge okike. Na geology nke oge a, anyị na-ahụ na mbadamba nkume nke Australia na India kwagara na ebe ugwu ọwụwa anyanwụ n'ihi mmegharị nke kọntinent kọntinent. A na-eme atụmatụ na ọsọ nke ije nke ndị a efere tectonic dị ihe dị ka centimita 6 kwa afọ. Ugbu a ọnụego a dị ala karịa.
Anyi aghaghi iburu n’uche na mgbanwe nke ihu igwe n’usoro Paleogene metutara anumanu nke Paleogene. Enwere mgbanwe mgbanwe ihu igwe dị ukwuu dị ka izu jụrụ oyi nke mpaghara polar niile. N'ihi mbelata nke ụwa niile, ọ ga-ekwe omume ikwe ka ụwa dum jụọ oyi. Ka oge Paleogene na-aga n’ihu, okpomoku nke mbara ụwa mụbara ọzọ. Ọ bụkwa na mmụba nke okpomọkụ mere ka e nwee ọnọdụ okpomọkụ nke ebe okpomọkụ n'ọtụtụ ebe. Dị ka anyị maara, ebe okpomọkụ ihu igwe e ji tumadi ndị otutu okpomọkụ, oke iru mmiri na ezigbo mmiri ozuzo. Ihe a niile na - eduga na mmepe nke fauna nke Paleogene.
Otutu umu ihe di iche iche gha agha imeghari onodu ubochi ma nwee ike ime ya n'agbanyeghị nbibi nke mere n'oge gara aga. Otu n'ime taxa nke enwere ike mepụta bụ osisi angiosperm.
E kewara oge Paleogene na oge atọ: ndị Paleocene, nke Eocene na Oligocene. Na nke ọ bụla n'ime oge ndị a, anyị na-ahụ mmepe dị iche iche nke ụmụ anụmanụ Paleogene. Ka anyị nyochaa ndị nke zuru ezu.
N'oge Paleocene oge anyị hụrụ ọtụtụ anụmanụ nke ga-adị ndụ site na mkpochapụ mbubreyo nke Cretaceous. N'ihi ihe ae kpochapụrụ nke ukwuu, ụmụ anụmanụ nwere ike ịzụlite àgwà dị iche iche iji kwekọọ na gburugburu ọhụụ. Mbibi a nyere ya ohere ịgbasa ma gbasaa na ụdị ụfọdụ nke ahịhịa na ahịhịa. Ha jiri ohere ahụ mee ihe karịsịa na dinosaurs nọrịị. Ma na ụmụ anụmanụ ndị a e weere ha dị ka ndị kacha mkpa na-eri ibe ha na ụwa niile. Anụmanụ niile kwesịrị ịsọ mpi maka ihe ndị sitere n'okike na dinosaurs.
N'etiti ụmụ anụmanụ nke Paleogene nke pụtara ìhè n'oge Paleocene anyị nwere ihe na-akpụ akpụ. Ha bụ otu ìgwè ụmụ anụmanụ ndị lanarịrị ikpochapụ nke ọma ma nwee ihu ọma n'ihi ọnọdụ ihu igwe nke oge a. N'etiti anụ ndị na-akpụ akpụ dị ukwuu, anyị na-achọta ogige mmiri na-ebikarị na mmiri. Agwọ na nduru mmiri nwekwara nnukwu mmepe.
Banyere nnụnụ ndị ahụ, ha gbasaa n'ihi mmụba nke okpomọkụ na mpaghara ebe okpomọkụ. Nnụnụ ndị na-atụ ụjọ bụ ndị a kacha mara amara n'oge ahụ. Ha buru ibu mana enweghị ike iji efe efe. Omume nke ụdị ndị a bụ anụ na-eri anụ ma were ya dị ka anụ na-atụ ụjọ maka ọtụtụ anụmanụ. Speciesdị nnụnụ ndị ọzọ chọtara nnukwu mmepe n'oge anụ ọhịa Paleogene dị nnụnụ mmiri, nduru, ikwiikwii na ọbọgwụ.
Anụ mmiri mmiri ahụ mepụtara nke ukwuu n'ọtụtụ azụ. O mere nnukwu asọmpi n'ọhịa mmiri na sharks gbasara iji ghọọ ndị isi na-eri anụ ọhụrụ. Na mpaghara nke mammals, otu n'ime anụmanụ ndị mepụtara kachasị n'oge Paleogene fauna, anyị na-ahụ placentals, monotremes na marsupials. Anyị na-achọtakwa ìgwè nke òké, primates, lemurs, na ndị ọzọ.
N'ime oge Miocene, ụmụ anụmanụ Paleogene mepụtara tumadi na otu otu anụmanụ na nnụnụ. Invertebrates jisiri ike ịzụlite ma gbasaa oke ntakịrị na gburugburu mmiri. Ọtụtụ mollusks, gastropods, bivalves, cnidarians echinoderms nwere ike ịmalite n'oge ahụ. Ìgwè nke ndanda nwere ikekwe otu ìgwè ụmụ anụmanụ ndị mepere emepe nke na-agbanwe agbanwe.
Nnụnụ bụ ụdị ndị mepụtara n'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma. Ndị kasị baa ụba bụ ụdị ndị a ma ama dị ka Phorusrhacidae, Gastornis na penguins. N’ọhia nke ihe nākpu akpu na anumanu nke meputara n’ọdi-nma, ayi hutara anumanu nwere ike iru mita iri n’ogologo. N’etiti anụmanụ ndị a anyị nwere ndị nọ n’otu ebe, ndị nọ n’ike na ndị Ambulocytids. Anụmanụ ọ bụla nwere ihe pụrụ iche nke na-enyere ha aka ime ka ụwa niile dịrị n’oge ahụ.
Akụkụ ikpeazụ nke ụmụ anụmanụ Paleogene na-ezo aka na fao Oligocene. Ihe eji mara ya bu inwe otutu anumanu di iche-iche di iche-iche ma nwekwa ike n’agbanyeghi onodu ubochi ebe ahuru ha. Ebe mgbanwe nke mammals pụtara. Otutu umu anumanu puru iche puta, n'etiti nke ayi nwere nkpuru ahihia, ihe ndi ozo, ndi primates na ndi anumanu.
Rodents nwere njiri mara nke inwe ihe di nkpa jiri otutu ojiji. A na-eji ya eme ihe nke ndị na-eri ibe ha ma ọ bụ taa ahụhụ n’elu nkụ. Primates bụ otu anụmanụ ndị mepere emepe karịa mepere emepe ma nwee mkpịsị ụkwụ ụkwụ na aka ha. Otu n’ime uru ndụ ụmụ anụmanụ ndị a bara n’anụmanụ karịrị anụmanụ ndị ọzọ bụ na ha nwere mkpịsị aka nwere ihu abụọ. Na mgbakwunye, ha nwere ụkwụ akụrụngwa nke na-enye ohere ka obo ụkwụ nile kwadoo iji wee na-aga nke ọma.
Canids so n’otu nkịta wolf na nkịta. Njirimara ha bụ nke inwe ahụ dị ọkara ma ha na-eje ije na mkpịsị aka. Ha nwere nri na-eri anụ ha, a na-ahụkarị ha na njikọ na-eri ibe ha na usoro nri.
N'ikpeazụ, ndị cetaceans bụ otu ìgwè nke mammals nke mepụtara ntakịrị oge n'oge ụmụ anụmanụ Paleogene. Ha bụ anụmanụ ndị kachasị emegharị ahụ maka ndụ mmiri ọ bụ ezie na ha na-anọgide na-eku ume ume.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere anụmanụ nke Paleogene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Paleogene anụmanụ
Modelsdị ihu igwe